Amahhotela anezinhlelo ezahlukahlukene zosuku lwezithandani | Izindaba Zokuhamba
Amahhotela anezinhlelo ezahlukahlukene zosuku lwezithandani
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, General, Ezothando
Yize sicabanga ngendlela amnandi ngayo amaCarnival, uma sinophathina kufanele sihlele okuthile ngosuku olusondele kakhulu, Februwari 14, uSuku Lwezithandani. Iholide abathi lingelokuhweba kakhulu, kepha lokho kungukunye futhi ukwazisa uzakwethu ukuthi kubalulekile kithi nokuthi sifuna ukugubha lolu suku nabanye abaningi.
Kungakho sizokunikeza ezimbalwa imibono yosuku lwama-valentines, namahhotela anikezela ngezinhlelo ezahlukahlukene zokwabelana njengezithandani Kusukela esimisweni se-spa, esivame kakhulu, kuya osukwini lokudla uma izithandani zethu zithanda ukuzama izitsha ezintsha ukugibela ihhashi. Kunemibono yakho konke ukuthanda, ngakho-ke akudingeki ukuthi sime ezimbalini nakoshokholethi minyaka yonke. Lesi sikhathi singasungula okusha okuthe xaxa ukuze siphile ngomuzwa oyingqayizivele.
1 Ama-Valentines anezigemegeme
2 Usuku lwezithandani ema-spas
3 Izithandani ezinokubaleka kokudla
4 Usuku luka-Valentine, izindlela ezingcono kakhulu zokubaleka
Uma umlingani wakho ethanda izinto ezintsha futhi ethanda imizwa, nalolu futhi kungaba usuku lokuphila umuzwa oshubile futhi omnandi. Ehhotela Boí Taüll Resort ungajabulela i- ukubaleka ngokudlula kwe-ski ukujabulela impelasonto ezintabeni zaseCatalonia. Izinsuku zokushushuluza nokuzijabulisa eqhweni, behleka ndawonye futhi bezijwayeza umdlalo othokozisayo. Kunezinhlelo ezinokushushuluza ezintabeni ukuya ekuqondeni nasekukhuphukeni kwamatshe, ngakho-ke singakhetha uhlelo esilufunayo eLleida Pyrenees.
Ehhotela los Nogales e-Aragon ungenza i- ukuphunyuka ngokuhamba kahle kwehhashi ngemvelo yasendle. Ilungele abathandi bezilwane nezindawo zemvelo. Itholakala eSigodini saseBenasque, e-Aragonese Pyrenees, futhi ihhotela liphinde linikeze ithuba lokubalekela ukujabulela i-spa, futhi ungakhetha igumbi elinebhavu lokugeza i-hydromassage.
Sinawo uhlela ukuya e-rafting eCantabria, ePosada La Cabaña de Salmón, eSantillana del Mar. Yindlu yakudala yekhulu le-XNUMX nenhle kakhulu, nayo engamakhilomitha amabili nje ukusuka emihumeni yase-Altamira. Ukuphunyuka nge-adventure nomlando, okungenani okwehluke kakhulu.
Usuku lwezithandani ema-spas
Lolu uhlelo olujwayelekile, futhi yize sizokhuluma ngamahhotela athile, impela eduze kwalapho uhlala khona uzothola one-spa noma i-spa ongayijabulela. ukuphumula kancane njengezithandani. Ngaphezu kwalokho, amahhotela amaningi ahlinzeka ngamabhodlela ama-cava namadili okudla othando kulezi zinsuku, ngakho-ke kuhlale kunguhlelo olusebenzayo.
Ehhotela Balneario Lanjarón sizojabulela i- ukubaleka ngesidlo sakusihlwa nokufinyelela e-spa. Ngaphezu kwalokho, kuseGranada, eduze nedolobha kanye neSierra Nevada Natural Park, ngakho-ke uma sinesikhathi singabona i-Alhambra noma siye ukujabulela iqhwa. Ihhotela elinokunikezwa okuphelele kakhulu.
Esinye isibonelo sokubaleka okukhethekile kungaba yiHhotela Spa Casona La Hondonada, eCantabria. Kuyihhotela lesitayela sasemakhaya, elithule kakhulu, lapho banikela khona amakamelo anendawo yokugeza ye-whirlpool nedina lothando, njengephakethe losuku lwezithandani. Kukhona uhlelo olufanayo eHotel Balneario Areatza eVizcaya, ngokunethezeka maphakathi nendalo kanye nesifunda esishisayo, esiseduze neGorbea Natural Park. Ehhotela Balneari Termes Victoria esikhungweni esingokomlando saseCaldes de Montbui unechibi elishisayo nesidlo sakusihlwa sokunambitha kuhlelo lwe-Valentine's Day.
Izithandani ezinokubaleka kokudla
Kunamahhotela agxila kwisici se-gastronomic, ngamadina noma amalantshi lapho ungakwazi ukujabulela cuisine ejwayelekile kusuka endaweni izama izitsha ezimnandi nezintsha, ngakho-ke kuhle uma izithandani zithanda ukuzama izitsha zokupheka nezitsha. Ngokusobala, ukuzama okuthile okusha kuzodingeka ukuthi uye kwezinye izifunda ngobaleke lwangempelasonto.
Ehhotela bon Retorn e-Figueres e-Alt Empordá ungajabulela i- ukunambitha iwayini nedina lapho baphinde banikeze khona iwayini lendawo, elidume kakhulu, nethikithi eliya ekhasino. Yiqiniso, impela isibhamu sokuqala esinephuzu elihlekisayo.
E-Hospes Palacio de San Esteban une ukubaleka kwe-gastronomic eSalamanca, bezama izitsha ezijwayelekile endaweni yokudlela enezinkanyezi ezinhlanu. Banikela ngebhodlela le-cava ukubungaza umcimbi okhethekile, futhi kuzoba yindlela enhle yokujabulela ukudla kwaseCastilian.
Usuku luka-Valentine, izindlela ezingcono kakhulu zokubaleka
Kuneminye imibono eyehlukile futhi ingeyangempela, ngakho-ke kuyizinhlelo zokubhekelwa. Ehhotela iShanti Som Wellbeing Retreat e-Andalusia, abangokomoya kakhulu bangajabulela i-Asian and Oriental fusion cuisine, ene Ukwelashwa komzimba we-Lemon Ginger endaweni engokwemvelo nephumule kakhulu. Futhi kunehhotela elilandela imigomo ye-Feng Shui futhi linezinhlelo ze-yoga.
Ehhotela Hospes Puerta Alcalá eMadrid unayo iphakethe elikhethekile i-Aires del Sur. Ungakujabulela ukuhlala kwakho futhi uvakashele umbukiso wehora elilodwa we-flamenco eLas Tablas. Futhi banokufinyelela e-spa ngechibi lokuphumula futhi itholakala eduze neRetiro Park.
Lezi ezimbalwa nje izikhuthazo zokwenza lolu suku lube into ekhethekile. Ngokusobala, kunezinhlelo eziningi namahhotela kulo lonke i-geography, kepha siyethemba ukuthi sikusizile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ezothando » Amahhotela anezinhlelo ezahlukahlukene zosuku lwezithandani
Izindlela zokuphumula zosuku lwezithandani
IPanda Bear: phakathi kothando nokwesaba